लसुन सिरानी मुनि राखेर सुतेमा यस्ता हुन्छन फाइदै फाइदा - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
लसुन भान्साको एक महत्वपूर्ण अंग हो । सामान्य दाल, भात तरकारी होस वा कुनै विशेष परिकार, स्वाद निकाल्नका लागि लसुनको प्रयोग गरिन्छ । लसुन स्वादका लागि मात्र होइन, यसको छुट्टै अन्य गुण पनि छन् । लसुनलाई जडिबुटीका रुपमा पनि लिइन्छ ।
यदि लसुनलाई राती सुत्दा सिरानी मुनि राखेर सुत्यो भने धेरै कुरा फाइदा हुने एक अध्ययनले जनाएको छ । लसुनमा एक प्रकारको विशेष गन्ध हुन्छ । यदि सिरानी मुनि राखेर सुत्नुभयो भने लसुनबाट आउने त्यो विशेष प्रकारको गन्ध नाकबाट शरिरमा प्रवेश गर्छ । त्यो गन्ध शरिरका लागि निकै फाइदाजनक हुने विज्ञहरुको दावी छ ।
लसुनको केस्रालाई सिरानी मुनि राखेर सुतेमा हुने यस्ता अद्भूत फाइदाहरु हुन्छन् :
१. लसुनमा हुने भोल्टाइल तेलको गन्धले शरिरमा गर्मी पैदा गर्छ । यसले रुघा तथा सर्दीको समस्या हटाउँछ ।
२. लसुनको गन्धले शरिरमा ब्लड सर्कुलेशनलाई सुधार गर्छ । यसबाट राती राम्रो निद्रा लाग्छ ।
३. लसुनको गन्धले मिर्गीको समस्या कन्टोल गर्छ । त्यसैले राती सुतेका समयमा लसुनले कुनै समस्या हुनबाट रोक्छ ।
४. लसुनको गन्धबाट कोलस्टोल लेवल नियन्त्रण हुन्छ । जसबाट मुटुको रोगबाट हुने खतरा कम हुन्छ ।
५. लसुनको गन्धबाट शरिरको ब्याक्टेरिया नष्ट हुन्छ । यसले छालामा हुने इन्फेक्सन, पिपल्स, वेचैन हुने समस्या हुँदैन ।
एअरपोर्टबाट उडेको केही समयमा नै विमान वस्तीमा खस्यो, ७१ जनाको मृत्यु
नेकपा झापाका इन्चार्ज-सेक्रेटरीसहित १० जना नेता गिरफ्तारपछि बेपत्ता, प्रहरीले कहाँ पुर्‍यायो ?
ग्रेड सीट कुर्दाकुर्दै हजारौ बिद्यार्थी कक्षा ११ पढ्नबाट बन्चित